ကွန်မင့်မေးခွန်း = အဲဒီတုံး (တုန်း) ကလဲ လေးမတ် တကျပ်ပဲလား ၄ မတ် = ၁ ကျပ်။ တမတ် = ၂၅ ပြား။ ကွန်မင့်မေးခွန်း = ၂၅ပြား = ၄ဲ။ ၁ဲ ဆိုတာရှိလား။ မြန်မာပြည်မှာ အလွတ်ကျက်ခဲ့ရတဲ့စံနစ်က ဗြိတိသျှ။ ပိုက်ဆံတွေက ကျပ်-ပဲ-ပိုင်။ ပေါင်-သျှီလင်-ပဲနိ။ ဒေလီမှာ ကေဂျီနဲ့ လီတာ။ ယူအက်စ်မှာ မိုင်နဲ့ ဂါလံသုံးတယ်။ ၁ ပဲနိ ၁ ဆင့်၊ ၁ နစ်ကယ်် ၅ တင့်၊ ၁ ဒိုင်းမ် ၁၀ ဆင့်၊ ၁ ကွာတား ၂၅ ဆင့် တဲ့။ ဂွကျတယ်။ ငွေကို အရင်က အသပြာလို့ ခေါ်တယ်။ ၁၈၅၂ မှာ မင်းတုန်းမင်းလက်ထက် ငွေဒင်္ဂါးပြားစထုတ်တယ်။ ၁ ပဲ။ ၂ ပဲ = ၁ မူး။ ၄ ပဲ = တမတ်။ ၁ဝ ပဲ = ၅ မူး။ ၁ဝ မူး = ၄ မတ် = ၁ ကျပ်။ ငွေဒင်္ဂါးလို့ ခေါ်တယ်။ ၁၈၈၉ အင်္ဂလိပ်လက်ထက်မှာ ငွေ ၁၆ ပြား = ရွှေ ၁ ပြား ထုတ်တယ်။ မြန်မာ ငွေ ၁ ပြားဟာ အိန္ဒိယ ၁ ရူးပီးနဲ့ ညီမျှခဲ့တယ်။ နောက်မှာ ကြေးပြားတွေ ထုတ်လာတယ်။ ရွှေရယ်၊ ငွေရယ်၊ ကြေးရယ် ဖြစ်လာတယ်။ ငွေစက္ကူ ထုတ်တယ်။ သတ္တုရောပြားတွေ ထုတ်လာတယ်။ ငွေလို့ အသုံးများလာတယ်။ ပိုက်ဆံဆိုတာ ဟင်ဒီစကား ပိုက်ဆားကနေလာတယ်။ ပိုက်ဆံယူနစ်များ ၂ ပဲ = ၁ မူး ၂ မူး = ၁ မတ် = ၂၅ ပြား = ၄ ပဲ ၂ မတ် = ငါးမူး = ၅ဝ ပြား = ၈ ပဲ ၂ ငါးမူး = ၁ ကျပ် = ၁ဝဝ ပြား = ၁၆ ပဲ ဆန်ယူနစ်များ ၂ လမြူ = ၁ လ
နေ့လယ်စာ စားနေတုန်းမှာ အင်တာဗျူးလာတယ်။ ရန်ကုန်တိုင်းမ်ကလို့ ထင်တယ်။ အင်တာဗျူးအသွား ပိတောက်ပင်နားက ဖြတ်သွားရတယ်။ ရောက်စ တွေ့ရတဲ့အမြင်ကိုမေးတယ်။ အယ်ဒီတာချုပ်မေးတာက လေးစားလွန်းနေတယ်လို့ ထင်မိတယ်။ ဟဒ်တော့လ် လို မေးတာတွေ ဖြေထားဖူးတော့ လွယ်နေတယ်။ ဟော့တော့လ်ကို ပူနေတဲ့ရန်ကုန်မှာ ရေဖန်ခွက် မလိုလိုက်ပါ။ နဝတ လက်ထက် ဒေါက်တာကျော်ဝင်း (သမားတော်ကြီး) ကို လန်ဒန်သံအမတ်ကြီးခန့်တယ်။ BBC Hard Talk မှာမေးတော့ ရေဖန်ခွက်ကို ခဏခဏမော့ချနေတာ တီဗွီမှာမြင်ရတယ်။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ ၁-၅-၂ဝ၁၈ ၁-၅-၂၀၂၁
• BSPP ခေါ် စစ်အာဏာရှင် ပဌမမျိုးဆက်မှာ အများဆုံးသုံးတဲ့ ပုဒ်မ ၆/၁ • SLORC/SPDC ခေါ် စစ်အာဏာရှင် ဒုတိယမျိုးဆက်မှာ အများဆုံးသုံးတဲ့ ပုဒ်မ ၅ ည • SAC ခေါ် စစ်အာဏာရှင် တတိယမျိုးဆက်မှာ အများဆုံးသုံးတဲ့ ပုဒ်မ ၅၀၅ (က) (ခ) စစ်ကောင်စီအမည်နဲ့ ပုဒ်မတွေသာမတူတာ စစ်အာဏာရှင်မျိုးဆက် DNA ကတော့ အတူတူပဲ။ Photo မြိုင်မြို့နယ် အနောက်ပိုင်းဇုံမှာ မေလ ၁ ရက် May Day နေ့ မနက်ပိုင်းက စစ်အာဏာရှင်ပြုတ်ကျရေး ပင်မသပိတ်စစ်ကြောင်း ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
ကွန်မင့်မှာ အရုပ်တွေမတင်ကြပါရန်လို့ ခဏခဏ (ခဏခဏ) ရေးပါတယ်။ မင်စင်ဂျာမှာ အရုပ်တွေမတင်ကြပါရန်လို့ ခဏခဏ (ခဏခဏ) ရေးပါတယ်။ လက်နဲ့စာမရေးအားရင် အရုပ်တွေလည်း မပို့ပါရန်မတင်ကြပါရန်လို့ ခဏခဏ (ခဏခဏ) ရေးပါတယ်။ ဘယ်လောက်ပြောပြော မရပါ။ ကျွန်တော့်မှာ အာဏာတမတ်သားလောက်ရှိ၏။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ ၁-၅-၂၀၂၀ ၁-၅-၂၀၂၁
ရပ်ပြစ်ရှစ်ပါးမှာ သတ်ပုံမှားနေတယ်။ တိရစ္ဆာန်လို့ ရေးပါတယ်။ ဆွံ့အနားမကြားလို့ ရေးရတယ်။ ဘုဒ္ဓသုညော မှန် မမှန် မသိပါ။ ဘုရားသာသနာနှမကြုံတွေ့ရခြင်းကလည်း အဓိပ္ပါယ်မရှိပါ။ လယ်တီဆရာတော်ကြီးဟောတယ်ဆိုတဲ့တရားမှာလည်း နိသယဉ်းလို့ရေးတာ မတွေ့ဖူးပါ။ ယဉ်းလို့လည်း မရှိပါ။ နိဿယည်း (အရင်ထုတ်) နိဿယ (အရင်ထုတ်) နိသျည်း (အရင်ထုတ်) နိဿရည်း (နောက်ထုတ်) တရားစာတွေ ဆုတောင်းစာတွေမှာ သတ်ပုံမှားတာက ပိုပြီးတာဝန်ကြီးတယ်။ တရားစာမှားနေရင် အမှန်သိမြင်ဖို့ မဖြစ်နိုင်တော့ပါ။ အမှန်အတိုင်း မရေးတတ်ရင် မတင်တာ မဖြန့်တာက တော်သေးတယ်။ ပိုဆိုးတာက ဘုန်းကြီးဆိုပြီး ဘုန်းကြီးအလုပ်မလုပ်။ ဆရာတော်ဆိုပြီး ဆရာတော်မပီသတာတွေ များလာတယ်။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ ၁-၅-၂၀၁၉ ၁-၅-၂၀၂၁
နှာခေါင်းစည်း မလိုကြပါ။ ဆေးကျောင်းသားဘဝမှာ လက်ဖက်ရည်ဆိုင် နေ့တိုင်းထိုင်တယ်။ နယူးဒေလီမှာတော့ ဆန္ဒပြသွားတိုင်း ထိုင်စရာဆိုလို့ ကျောက်တုံးသာရှိတဲ့ လမ်းဘေးလက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာ သောက်တယ်။ လက်ဖက်ရည်ကတော့ ကောင်းတယ်။ ရေနွေးကြမ်းမရှိ။ တမြန့်ပြင်တနှစ်က ဒီလိုနေ့ ဘုရားဖူးပြီးအပြန်မှာ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာထိုင်ကြတယ်။ မြီးရှည်၊ နန်ကြီး နန်းလတ် မုံ့တီ။ ကော်ဖီနဲ့ လက်ဖက်ရည်။ ကောင်းပါသည်။ အကြော်စုံမှာလည်း မဆလာမပါလို့ ကြိုက်ပါသည်။ လက်ဖက်ရည်ခွက်လေးတွေတော့ သေးသည်။ ရေနွေးကြမ်း ဆိုင်တိုင်းလိုလို ကောင်းပါသည်။ ရန်ကုန်သည် နယူးဒေလီထက်သာ၏။ အခုတော့ ရန်ကုန်သည် ဇနပုဒ်လောက် မကောင်းတော့ပါ။ ဆောရီး။ လက်ဖက်ရည်ဆိုင် စိတ်အေးလက်သာ ထိုင်နိုင်တဲ့ခေတ် အမြန်ပြန်ရောက်ပါစေသတည်း။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ ၁-၅-၂၀၁၈ ၁-၅-၂၀၂၁
May Day မေဒေး
၂၀၁၈ ခုနှစ် မြန်မာပြည်ကို အလည်ပြန်စဉ်က ရန်ကုန်မြို့မှာ မေဒေး ခေါ် အလုပ်သမားနေ့ပွဲကို တက်ခဲ့ပါတယ်။ လှိုင်သာယာမှာ ကျင်းပတယ်။ နေပူပူ ဖုံထူထူနဲ့ သဘာဝကျတယ်။ နယူးဒေလီမြို့မှာနေစဉ်က နှစ်စဉ်ကျင်းပတဲ့ မေဒေးနေ့အခမ်းအနားတွေကို တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ အမေရိကမှာ မေဒေးမရှိပါ။ Labor Day လေဘာဒေးလို့ရှိတယ်။ မြန်မာလိုပြန်ရင်လည်း အလုပ်သမားနေ့ပဲ။ မေဒေးနဲ့ အနှစ်သာရချင်းလည်း မတူပါ။ သူတို့ရဲ့ လေဘာဒေးဆိုတာ အမေရိကန်အလုပ်သမားတွေရဲ့ လူမှုရေးနဲ့ စီးပွါးရေး စွမ်းဆောင်နိုင်စွမ်းကို ဂုဏ်တင်တဲ့နေ့ရက်ဖြစ်တယ်။ နှစ်စဉ် စက်တင်္ဘာ ပထမတနင်္လာနေ့မှာကျရောက်တယ်။ တရားဝင် အလုပ်နားရက်လည်းဖြစ်တယ်။ မြန်မာပြည်မှာ လူမှုရေးတွေဖွံ့ဖြိုးစည်ပင်၊ တိုင်းပြည်စီးပွါးရေးလည်းကြွယ်ဝချမ်းလာတဲ့တနေ့မှာ လေဘာဒေးလို့ လုပ်နိုင်ကြရင်ကောင်းမှာပဲ။ အခုတော့ နေ့တိုင်းက လောဘဒေးဖြစ်နေသေးတယ်။ ဆောရီး။ မြန်မာပြည်က အလုပ်သမားတွေဘဝ တိုးတက်ပါစေ။ ကျွန်တော်ရောက်ခဲ့တဲ့ လှိုင်သာယာသတင်းတွေကြားရတိုင်း သတိရတယ်။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ ၁-၅-၂၀၁၈ ၁-၅-၂၀၂၁
တမြန့်ပြင်တနှစ်က ဒီရက်တွေမှာ ရန်ကုန်ရောက်နေကြတယ်။ ပျော်နေသလား၊ ပျော်နေပြီပေါ့လို့ ရေးကြတာတွေ ဖတ်ရတယ်။ ကျေးဇူး။ လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ်နှစ်ဆယ်ကျော်ကာလမှာ စိတ်ပျက်နေပါသလား၊ ဝမ်းနည်းပူဆွေးနေသလား မေးခွန်းမျိုးကို မဖြေခဲ့ရပါ။ မေးသူလည်းမရှိ။ အဖြေလည်း မရှိခဲ့ပါ။ မမေးရဲကြလို့သာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်ပကို နိုင်ငံရေးကြောင့် ရောက်နေကြသူတွေကို နေကောင်းလို့တောင် မမေးရဲခဲ့ကြပါ။ နဝတ/နအဖ စစ်အစိုးရဟာ အဲလောက်ထိဆိုးတယ်။ ဒီမိုကရေစီရေးလုပ်သူတွေအတွက်တော့ နဝတ/နအဖ စစ်အစိုးရဟာ ဗခက နေဝင်းထက် ဆိုးသွမ်းယုတ်မာကြတယ်။ ၂၀၂၁ မှာက အဆိုးဆုံး။ ရွှေတိဂုံဘုရားဖူးခဲ့လို့လာမသိ အဲဒီဘေးနဲ့ ဝေးရာမှာနေရတယ်။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ ၁-၅-၂၀၁၈ ၁-၅-၂၀၂၁
မြားပုံသဏ္ဌာန်ဟာ အရင်းမှာကားပြီး အဖျားကိုသေးသေးသွားတယ်။ အဆုံးစွန်မှာ အမှတ်လေးတခုသာဖြစ်တယ်။ ချီကာဂိုမြို့ဟာ ကြီးမားတယ်။ ဒုတိယထရန်ဇစ် ဟောင်ကောင်ဟာ ကြီးကျယ်တယ်။ နောက်တခါ စင်္ကာပူ၊ နာမည်ကြီးတယ်။ သေးသေးလာတဲ့ မြားဦခရီးစဉ်ရဲ့ ဒက်စတီနေရှင်းရန်ကုန်မှာ ရန်တွေကုန်ပါတယ်။ မြားဦးလှည်တယ်ဆိုတဲ့စကားရှိတယ်။ ကျွန်တော့ခရီးစဉ်၏ မြားဦးကား ဟုမ်း ခေါ် နေရပ်ဆီသို့သာ။ ဂငယ်ကွေ့မှာ မြားဦးဟာ တူရာအရပ်မတူပေမဲ့ တူဆုံဆုံရပ်ကိုသာ သွားတယ်။ ထွက်ခွါရာအရပ်နဲ့ ဆုံရပ်ဟာ မြန်မာပြည်ပါ။ အပြောင်းအလဲဆိုတာ ဂငယ်ကွေ့ မဟုတ်ပါ။ မြားထိပ်ဖျားဆိုတာ ချွန်မြတယ်။ အဆိပ်လူးထားလို့လည်းရတယ်။ ကတိသစ္စာတည်သောအခါ အဆိပ်ကိုပါ ပျက်ပြယ်စေနိုင်တယ်။ ကိုယ့်နိုင်ငံက ဘုရားစေတီတွေမှာ တိုင်တည်ခဲ့ပါသည်။ ကျွန်ုပ်ပစ်ခဲတဲ့မြားလည်း ၂၈ နှစ်အကြာ ခရီးသွားခဲ့ပါပြီတည်း။ အင်ဒီယာနာပုလစ်မှ ချီကာဂို၊ ထိုမှတခါ ဟောင်ကောင်။ နောက်တဆင့် စင်္ကာပူ။ နောက်ဆုံးမှာ ရန်ကုန်။ အနောက်ကထွက်ပြီး အရှေ့ကနေ ပြန်ဝင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ ၁-၅-၂ဝ၁၈ ၁-၅-၂၀၂၁
Curse ကျိန်စာ (၂)
(ကန်တော့) Curse of skinny hit woman ပိန်ပိန်ပါးပါး လူသတ်သမားအမျိုးသမီးဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့သတင်း အခုလေးတင် ဖတ်ရတယ်။ မက်စီကို မူးယစ်ဆေးဂိုဏ်းက အဲလိုအမျိုးသမီးက ၂ ယောက်ရှိပြီ။ နှစ်ယောက်လုံး ကံမကောင်းကြလို့ ကျိန်စာသင့်သူများလို့ သတင်းခေါင်းစဉ်တပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာလည်း အစိုးရကို နှစ်သစ်ဦး ကျိန်စာရေးသားသူသတင်းကို ကြားလိုက်ရပါသေးတယ်။ • မြန်မာပြည်ကကျိန်စာတွေကိုတော့ မရေးလိုပါ။ နိုင်ငံတကာသုတတချို့တလေသာ ရေးပါမယ်။ • ကျိန်စာကို အင်္ဂလိပ်လိုမှာ jinx နဲ့ hex လို့လည်းခေါ်တယ်။ တဖက်သားကို ကံဆိုးစေအောင်ဆိုတဲ့စာ၊ မှတ်တမ်း ဖြစ်တယ်။ • ရှေးဂရိခေတ် ဘီစီ ၄ ရာစုကတည်းကမှတ်တမ်းရှိတယ်။ လူကိုဖြစ်ဖြစ်၊ နေရာဌာနကိုဖြစ်ဖြစ်ရည်ရွယ်တယ်။ ကျိန်စာဆိုခဲ့သူဟာ ပါဝါရှိသူ၊ ရာထူးကြီးသူ၊ စုန်းကဝေပညာတတ်သူ၊ ဘာသာရေးဆရာ၊ ဝိဉာဉ်ပညာတတ်သိသူ စသဖြင့်ကနေ လုပ်လေ့ရှိတယ်။ • မကျေနပ်မှုကို ခံလိုက်ရသူကနေ မသေမီ လက်စားချေလိုတာမို့ ကျိန်သွားတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ • ဘာသာရေးနဲ့ ယဉ်ကျေးမှုတွေအရ ကျိန်စာတွေမတူကြပါ။ • အာဖရိကလူမည်းတွေက လူသွားလမ်းမှာ ကျိန်စာဆိုထားကိုချထားတတ်တယ်။ • အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသမှာ မျက်လုံးအကြည့်နဲ့ ကျိန်တယ်။ • ဂျာမန်တွေက နွားတွေ
ဆေးကျောင်းသားသူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူ ညစာစားရတယ်။ တရုပ်အစားအသောက် မီနူးထဲမှာ နှစ်ပေါင်း လေးငါးဆယ် သက်တမ်းရှိတဲ့ ဟင်းပေါင်းလည်းပါတယ်။ ဟင်းပေါင်းဆိုတာ သိုးတယ်လို့မရှိ။ အမယ်ကလည်း အစုံပါတယ်။ ဒေါက်တာစန်းရောင်ညွန့် (စိတ်ဆေးပညာအထူးကု)၊ ဗိုလ်မှူးကြီးခင်မောင်အေး (ပြည်သူ့ကျန်မာရေး) နဲ့ ဗိုလ်မှူးကြီးကျော်ညွန့် (သားဖွါးမီးယပ်အထူးကု) နဲ့အတူ ရိုးရိုးဆရာဝန်ကျွန်တော်။ အချင်းချင်းတော့ ဆေးမန်းမှာခေါ်သလိုသာ ခေါ်ကြပါတယ်။ ညစာစားပြီး ဆိုင်ကအထွက်မှာ ကလေးမလေးတယောက်က လာနှုတ်ဆက်တယ်။ ဖေ့စ်ဘွတ်ကနေသိတာတဲ့။ ညစာကျွေးတဲ့သူငယ်ချင်းကိုလာကြိုတဲ့ သူ့သားမက်ကလည်း ကျွန်တော့်ကို ဖေ့စ်ဘွတ်ကနေသိကြောင်းပြောတယ်။ တည်းအိမ်အရောက် ပဌမထပ်ကလည်း တအိမ်လုံးက ထွက်ပြီး နှုတ်ဆက်ကြပါတယ်။ ဖေ့စ်ဘွတ်ကနေသိတာပဲတဲ့။ ဖေ့စ်ဘွတ်ဖတ်ရသူတွေ ထမင်းစားကောင်းကြပါစေ။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ ၁-၅-၂ဝ၁၈ ၁-၅-၂ဝ၂၁
ထိုင်း နှင့် မြန်မာ ခြားနားမှု
ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ပရာယု ရာထူးမှ ချက်ချင်းဆင်းပေးရေးအတွက် အတိုက်အခံပါတီ ၆ ခုစုပေါင်းတောင်းဆို မြန်မာပြည်မှာ စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းရန် နိုင်ငံရေးပါတီ ၃၄ ခုက မအလ ကိုသံတော်ဦးတင်ခဲ့ကြ ၂၀၂၀ ခုနှစ် သြဂုတ်လ (၁၄) ရက်နေ့က နေပြည်တော်မှာ စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်းကို တွေ့ဆုံကြတဲ့ နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းများ 1. USDP chairman U Than Htay and secretary U Pike Htwe; 2. National Unity Party joint secretary U Nay Win; 3. New National Democracy Party chairman U Thein Nyunt; 4. National Progressive Party chairman Dr. Nay Zin Latt; 5. New Age People’s Party’s chair U Tun Aung Kyaw; 6. National Democratic Force Party chair U Khin Maung Swe; 7. People’s Pioneer Party chair Daw Thet Thet Khine; and 8. National Political Allies Federation’s chair U Thein Kyi; 9. Wunthanu Democratic Party chair Daw Nang Shwe Kyar; 10. Democracy and Peace Party acting chair U Myo Nyunt; 11. New Age Union Party chair U Aung Than; 12. Bamar People’s Party chair U Aung Than Tint; 13. Diversity and Peace Party chair Daw Sandar Oo; 14. People’s Part
ညောင်ငုတ္တိုကျေးရွာနဲ့ ညောင်ငုတ်တိုကျေးရွာဆိုတာ ဘယ်ဟာအမှန်ပါလဲ။ ကျနော် မနေ့က ဒလဘက်ကိုအသွားမှာ ညောင်ငုတ္တိုလို့ ရေးထားတဲ့ကျေးရွာလေးတခုကိုတွေ့ခဲ့လို့ပါ။ အရင်က ဖြတ်လမ်းရေးနည်းတွေ လုပ်ခဲ့ကြတယ်။ အဆင့်တွေပါလေ့ရှိတဲ့ ပါဠိစာနဲ့ မြန်မာစာ ရောနေတာများခဲ့တယ်။ သ္ခင်၊ ယ္ခင်၊ ယ္ခု၊ ကျမ္မာ၊ မင်းသ္မီး၊ မြမ္မာ၊ မိမ္မ၊ ဆုမ္မ၊ စသည်။ အဲတာတွေကို မဆင့်တော့ပဲ ခွဲရေးတာဟာ ပိုရှင်းလင်းပြီး အဓိပ္ပါယ်လည်း မပျက်စေလို့ သင့်မှန်တယ်။ အရင်ကတည်းကဘာသာခြားစာလုံးတွေကို မြန်မာပြန်ရာမှာပါ အဆင့်တွေနဲ့ရေးကြတယ်။ အင်္ဂလိပ်၊ အိန္ဒိယ၊ ပါကစ္စတန်၊ သီရိလင်္ကာ၊ ကမ္ဘောဒီးယား၊ အစ္စရေး၊ ဣသရေလ၊ စသည်။ အဲတာတွေကို အဆင့်မပါဘဲရေးလည်း သတ်ပုံပျက်စရာမရှိပါ။ မိုဃ်း၊ ၍့၊ ၏့၊ ကျမ္မာရေး၊ စွဲး၊ စဲး၊ ထဲး၊ ဆြာ၊ မင်းသ္မီး၊ မိုဃ်း၊ မဲးဇာ၊ မှု့၊ ယ္ခင်၊ မြမ္မာ၊ သ္ခင်၊ သဲး၊ ဥူး၊ ဧး တွေကိုလည်း အခု မရေးကြတော့ပါ။ အဲလိုပြောင်းလဲခြင်းကသာ ခေတ်အရပြောင်းတာမည်ပါတယ်။ ဝါစင်္ဂ = ဝါစ + အင်္ဂ = စကား + အစိတ်အပိုင်းကတော့ ပါဠိကနေလာတယ်။ ခက်တာတွေကို လွယ်ကူ ရှင်းလင်းအောင် ပြင်ရေးလာကြတယ်။ လွယ်တာကို ခက်အောင်ရေးတာတွေ ဥပမာ တခါတလေကို တစ်ခါတစ်လေ၊ တခါတရံကို တစ်ခါတစ်ရံ၊ တပင်တိုင်ကို တ
Cancer 12 Facts သိသင့်သော ကင်ဆာ အချက် ၁၂ ချက်
ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၄ ရက်နေ့က ကမ္ဘာ့ကင်ဆာနေ့။ ရေးထားတာ ၇ နှစ်ခွဲရှိပြီ။ ကိန်းဂဏန်းအသစ်တွေရှိပါမယ်။ အခြေခံအချက်တွေက မပြောင်းပါ။ ၁။ ကင်ဆာကြောင့် တကမ္ဘာလုံးမှာ နေ့တိုင်း လူပေါင်း ၂ သောင်း သေဆုံးနေရတယ်။ ၂။ တကမ္ဘာလုံးမှာ သေဆုံးသူ ၁၈ ယောက်မှာ ၁ ယောက်က ကင်ဆာကြောင့်သေရတယ်။ ၃။ ကင်ဆာကြောင့်သေရတာဟာ AIDS ကြောင့်၊ တီဘီကြောင့်နဲ့ ငှက်ဖျားကြောင့်သေရတာတွေ စုစုပေါင်းထက် ပိုများတယ်။ ၄။ ၂ဝဝရ အကုန်မှာ ကင်ဆာနဲ့ဆုံးပါးရသူပေါင်း ရ့၆ သန်းရှိတယ်။ ၅။ ယောက်ျားတွေမှာ အဆုပ်ကင်ဆာ၊ ဆီးကျိတ်ကင်ဆာ၊ အစာအိမ်ကင်ဆာတွေက အများဆုံးဖြစ်ကြတယ်။ ၆။ မိန်းမတွေမှာ ရင်သားကင်ဆာ၊ သားအိမ်ခေါင်း (သားအိမ်ဝ) ကင်ဆာ၊ အူမကြီးကင်ဆာတွေက အများဆုံးဖြစ်ကြတယ်။ ၇။ ရင်သားကင်ဆာဟာ အမျိုးနီးစပ်သူထဲမှာရှိရင် ဖြစ်နိုင်ချေ ၂ ဆ ရှိတယ်။ ၈။ Pap smear စစ်နည်းက သားအိမ်ဝကင်ဆာ စောစောသိဘို့ရာ အကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်။ ၉။ အမေရိကန် ယောက်ျားတယောက်ဟာ တသက်လုံး ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ချေ ၄၅% ရှိတယ်။ ၁၀။ ဆေးလိပ်သောက်သူတွေက အဆုပ်ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ချေ ၂၃ ဆပိုများတယ်။ ၁၁။ မချမ်းသာသေးတဲ့ တိုင်းပြည်တွေမှာ ကင်ဆာထက် ဝမ်းလျောဝမ်းပျက်ကြောင့် သေဆုံးရတာက ပိုများတယ်။ ၁၂။ တကမ္ဘာလုံးမှာ နှလုံးရောဂါဟာ လူတွေကို
အော် - ဖော်ဝေးမစုံ၊ ဆွေးဘို့ကြုံအောင်၊ တပုံတခန်း၊ ကဆုန်ဆန်းမို့၊ ယုန်စန်းငွေလ၊ စန္ဒရနှင့်၊ ပုဏ္ဏာ့တာရာ၊ ကြယ်ဝိသာလဲ၊ အာကာမြင့်ခေါင်၊ ကွန့်ရွှန်းငယ်ပြောင်သည်၊ တိမ်မှောင်ချွေလို့ လင်းတော့တယ်။ ။ သံဝှန်ငယ်ညောင်းငြိမ့်၊ စည်မောင်းလှိမ့်လို့၊ ဝတိန့်ခွန်ဆွတ်၊ နတ်များထွက်ကို၊ သခွတ်စားငယ်၊ ပြည်သမီးရင်း၊ လက်စကြွင်းကြောင့်၊ ရန်တင်းငယ်လှယ်သည်၊ စစ်ဆွယ်ပြိုင်လို့ ကျင်းတော့တယ်။ ။ သင်းမြေနံ့တကြိုင်၊ ။ စကားရွှေဝါနှင့်၊ ညောင်သီဒါ ရေတော်သွန်းချိန်မို့၊ ရွှန်းဝေလို့လှိုင်၊ ။ မြိုင်မြစ်စုံ ယမုန်ခ ပါတဲ့၊ ပြည်အမရမဏ္ဍိုင်၊ ခရိုင်နယ့်တဝိုင်း၊ ။ သို့ချိန်ဆီ၊ ရင့်ကျူးပဥ္စင်္ဂီနှင့်၊ တိမ်ပန်းချီ ပွေလို့ ရေးပေလိမ့်၊ ဆေးရင့်ပြာလှိုင်း။ ။ နံကိုင်းဇေယျ၊ ပြည်သန်လျက်ခုံ၊ ကြက်နှစ်စုံလဲ၊ ရွှေပုညနှင့်၊ ပတ္တမြာ့စစ်၊ ပြာယမိုက်ဆင်၊ မန်းသိုက်ဝင်တဲ့၊ ရှင်ပင့်ဖြစ်ကို၊ စိစစ်ဖွဲ့ကုံး၊ အိုဘယ့်နှယ်ဆုံးပေလိမ့်။ ။ ခွေနှုန်းတဲ့ဗျာသီ၊ ။ သူလဲ မြင်တော်လာနှင့်၊ ကန္တာမှာ ဖန်ရာကြုံ့ပါဘိ၊ လွမ်းပုံ့ပွေလီ၊ ။ ထီးတရာ ပဏ္ဏာကြို့ပါတဲ့၊ မင်းနေမြို့ဋ္ဌာနီ၊ သည်ဆီထင့် ရော်ရမ်း၊ ။ နယ်ရှစ်ခွင်၊ နတ်စစ်ကယ်ဗျူဟာဆင်လို့၊ မြော်အမြင်ထင်အတွေ
Carcinoembryonic Antigen စစ်နည်းလို့လည်းခေါ်တယ်။ ၁။ CEA က ၂ဝဝကျော်နေတယ် ဆေးသွင်းနေရင်းဖြစ်ဘူးတဲ့လူရှိလားရှင် အဖြေမှာ 257.5 လို့ရေးထားပါတယ် ၂။ ဆရာရှင့် ကျွန်မအမေတွင် Carcinoembryonic antigen 7.30 ရှိနေပါသည်ရှင်။ CA 125နှင့် Alpha Fetoprotein level ကတော့ပုံမှန်ပါပဲဆရာ။ ကျောက်ကပ်မှာတော့ အသားဓာတ်များပြီး ယောင်နေပါသည်ဆရာရှင်။ ကျောက်ကပ် ဆရာဝန်ကြီးက အစာအိမ်အူလမ်းကြောင်းနှင့်တိုင်ပင်ရန်အကြံပေးပါသည်ရှင်။ ထိုသို့ Carcinoembryogenic antigen များတာ ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေရှိလားဆရာရှင်။ အမေကတော့ ညာဖက်ကသာ အမြဲအောင့်ပြီးနာပါသည်ဆရာ။ စာတွင် အမှားတစုံတရာပါရှိက အနူးအညွတ်တောင်းပန်ပါတယ်ရှင်။ ၃။ ဆရာခင်ဗျား ကျွန်တော်က ကင်ဆာပိုင်ရှင်နှင့်မိတ်ဆွေကောင်းများ Group ကပါ။ ကိုယ်တိုင်က lymphoma ဖြစ်ဖူးသူပါ။ Group ထဲမှာ ကင်ဆာအကြောင်းနဲ့ပတ်သတ်ပြီးပြောကြရင်း နဲ့ member ယောက်ဆီက CEA result နဲ့ပတ်သတ်ပြီး မရှင်းတာတခုမေးချင်လို့ပါ။ Carcinoembryonic antigen (CEA) ကပုံမှန် ဆေးလိပ်မသောက်သူ အရွယ်ရောက်ပြီး3ng/mL နဲ့ ဆေးလိပ်သောက်သူ အရွယ်ရောက်ပြီး5ng/mL CEA 20ng/ml ကျော်ဆိုရင် သတိထားရမယ်လို့ ဖတ်ဖူးပါတယ်။ သူ့ရဲ့CEA result က 116 ကျော်
COVID-19 Vaccine Common Side Effects ကိုဗစ် ကာကွယ်ဆေး ဘေးထွက်သက်ရောက်မှုများ
ဘေးထွက်သက်ရောက်မှုများ မတူကြပါ။ ဆေးအမျိုးအစားတမျိုးတည်းမှာ သက်ရောက်မှု အနည်းငယ်ရှိသူ၊ မရှိသူ၊ အသင့်အတင့်ဖြစ်သူ မဖြစ်သူ မတူကြပါ။ ကာကွယ်ဆေးမတူရင်လည်း ဘေးထွက်သက်ရောက်မှု မတူပါ။ ဆေးထိုးတဲ့နေရာ • နာ • နီ • ရောင် တကိုယ်လုံးမှာ • ခေါင်းကိုက် • မောပန်း၏ • ကြွက်သားတွေနာ • ချမ်း • ဖျား • ပျို့ Anaphylaxis အနာဖလက်ဆစ် ခေါ် ရှော့ခ် ရခြင်း ရှားရှားပါးပါးဖြစ်နိုင်။ ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီး ဆေးခန်းမှာ ၁၅ မိနစ်စောင့်နေရ။ ရှော့ ခေါ် ဆိုးဝါးတဲ့ အလားဂျစ် ရီအက်ရှင်ဖြစ်ရင် ထိထိရောက်ရောက် ကုသပေးနိုင်။ လူ ၁ သန်းမှာ ၂ ယောက်ကနေ ၅ ယောက်သာဖြစ်။ သေဆုံးခြင်း မရှိ။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
Sinovac vaccine တရုပ်ထုတ် ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး
၁။ ဆရာခင်ဗျာ မြန်မာပြည်က တရုပ်ထုပ် (ထုတ်) ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးကိုထိုးသင့်ပါလား အကြံပြုပေးပါဆရာ ကိုဗစ် ကာကွယ်ဆေးတွေအကြောင်း ခဏခဏတင်ထားတယ် ၂။ ဆရာခင်ဗျ တခုလောက် မေးပါရစေ။ ကာကွယ်ဆေး ၉၅%၊ ၉၄.၅% ၅၀.၄% စသည် ဖြင့် ထိရောက် မူရှိတယ် ဆိုတာ ဘာလို နားလည် လို့ရမလဲ ခင်ဗျ။ ဥပမာ SINOVAC ဆိုရင် လူ ၁၀၀ ထိုးရင် ၅၀.၄ ယောက် ကရောဂါ ပိုးနဲ့ ထိတွေ့ တယ် ဒါပေမယ့် မကူးဘူး။ ၄၉.၆% က ကူးဆက် ခံရတယ်။ အဲလို ဆိုလို တာ လား ဆိုတာ လေး သိပါရစေ ခင်ဗျ။ Effectiveness ထိရောက်မှုဆိုတာ ကာကွယ်ဆေးတမျိုးကို ဆေးထိုးထားသူအုပ်စုနဲ့ ဆေးမထိုးသူအုပ်စု နှစ်ခုကို ယှဉ်ပြီး ကာလသတ်မှတ်ချက်အဆုံးမှာ ဘယ်လောက်အထိ ကာကွယ်မှုပေးသလဲကို ဆိုလိုတာဖြစ်တယ်။ ဘယ်ကာကွယ်ဆေးမှ ၁၀၀% တော့ မကာကွယ်နိုင်ပါ။ ပုံမှာ ကာကွယ်ဆေးတွေကို နှိုင်းယှဉ်ထားတာရှိတယ်။ ဘေးထွက်သက်ရောက်မှုလည်း မတူကြပါ။ နိုင်ငံတိုင်းမှာ ဆေးအမျိုးအစား၊ အသက် စတဲ့ ကျန်းမာရေးဌာနက တရားဝင်သတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့အညီ ကာကွယ်ဆေးထိုးရတယ်။ မြန်မာပြည်ကတော့ ပြောရတာ ခက်တယ်။ အစက တရုပ်ကပေးမဲ့သတင်းထွက်ပြီး အရင်ဆုံးရလာတာက အိန္ဒိယထုတ်။ ဘယ်အချိန်ကရောက်သလဲ မသိတဲ့ ရုရှားထုတ်ကို မေးသူတွေကမေးမှသာ သိရတယ်။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
Vaccine efficacy and effectiveness ကာကွယ်ဆေးထိရောက်မှု
ဆရာ ခင်ဗျ တခုလောက် မေးပါရစေ။ ကာကွယ်ဆေး ၉၅%၊ ၉၄.၅% ၅၀.၄% စသည် ဖြင့် ထိရောက် မူရှိတယ် ဆိုတာ ဘာလို နားလည် လို့ရမလဲ ခင်ဗျ။ ဥပမာ SINOVAC ဆိုရင် လူ ၁၀၀ ထိုးရင် ၅၀.၄ ယောက် ကရောဂါ ပိုးနဲ့ ထိတွေ့ တယ် ဒါပေမယ့် မကူးဘူး။ ၄၉.၆% က ကူးဆက် ခံရတယ်။ အဲလို ဆိုလို တာ လား ဆိုတာ လေး သိပါရစေ ခင်ဗျ။ Effectiveness ထိရောက်မှုဆိုတာ ကာကွယ်ဆေးတမျိုးကို ဆေးထိုးထားသူအုပ်စုနဲ့ ဆေးမထိုးသူအုပ်စု နှစ်ခုကို ယှဉ်ပြီး ကာလသတ်မှတ်ချက်အဆုံးမှာ ဘယ်လောက်အထိ ကာကွယ်မှုပေးသလဲကို ဆိုလိုတာဖြစ်တယ်။ ဘယ်ကာကွယ်ဆေးမှ ၁၀၀% တော့ မကာကွယ်နိုင်ပါ။ Duration of protection by vaccine Disease Estimated duration of protection from vaccine after receipt of all recommended doses 1,2 Comments Pertussis(whooping cough) 4-6 years Immunity from natural infection also wanes. Booster at age 11 years is offered Diphtheria Around 10 years Boosters are recommended in adults at 45 & 65 years of age Tetanus 96% protected 13-14 years, 72% >25 years Boosters are recommended in adults at 45 & 65 years of age Polio >99% protected for at least 18 y
Rheumatism (1) လေးဘက်နာ (၁)
၁။ ကျွန်မအသက်(၂၇)ပါ။ အိမ်ထောင်မရှိပါ။ လက်ဆစ် လက်ကောက်ဝတ်လေးတွေနာနေပါတယ်။ ရောင်ပြီး မနေနိုင်အောင်နာတာတော့မဟုတ်ပါ။ လက်ကြောလေးတွေတင်းပြီး နာပါတယ်။ ကိုက်ပါတယ်။ အပ်နဲ့ပေါက်သလို အသားတွေက စပ်ဖျင်းဖျင်းနဲ့ဖြစ်နေပါတယ်။ ASO 300 သွေးစစ်ကြည့်ပါတယ်။ ဆရာဂန်က pen v သောက်ခိုင်းပါတယ်။ ၁လ ရှိပါပြီ သိပ်မသက်သာသေးပါဘူး။ Pen vကို မသက်သာမချင်း ဆက်သောက်ရမလား ဘာလုပ်သင့်ပါသလဲရှင့်။ ၂။ ကျွန်မအသက် ၂၇ နှစ်ပါ။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်လောက််က လေးဘက်နာ Value 423 ရှိဖူးပါတယ်။ အခု ထပ်စစ်တော့ လေးဘက်နာပို မရှိတော့ပါဘူး။ အဖြေက Value 150 ပါ။ ဒါပေမဲ့ အခုဖြစ်နေတာ ၂ ပါတ်လောက်ရှိနေပြီ။ လက်ဆစ် ခြေဆစ်တွေ တစ်ခုပြီးတစ်ခု နာလိုက်ပျောက်လိုက်ဖြစ်နေတယ််။ နေ့တိုင်းဘဲ လေးဘက်နာပိုးစစ်တော့လည်း မရှိဘူး အရမ်းနာကျင်ပြီးကိုက်ခဲလွန်းတယ်။ အဲ့ဒါ ဘာရောဂါလက္ခဏာလဲဆိုတာ သိချင်ပါတယ်ဆရာ။ အများဆုံးဖြစ်တာက ဒူးဆစ် ခြေချင်းဝက် လက်ချောင်းလေးတွေ တစ်နေရာပြီးတစ်နေရာ အဆက်မပြတ်ဖြစ်နေတာ။ လမ်းလျှောက်မကောင်း ကွေးဆန့်မကောင်းဖြစ်ပြီး နာကျင်စွာခံစားရတယ်။ အဆစ်နာတယ်ဆိုလိုက်ရင် လေးဘက်နာလို့ဘဲ ထင်ကြတယ်။ နဲနဲတော့မှန်တယ်။ ဒါပေမဲ့ အဆစ်နဲ့ မဆိုင်တဲ့ နှလုံး၊ အရေပြား၊ ကျောက်ကပ်၊ အဆုပ
၁။ မင်္ဂလာပါ ဆရာရှင့် သမီးအသက်က ၃၅ ထဲမှာပါ မနက်မနက် အိပ်ယာအထမှာ စပီး (ပြီး) မတ်တပ် (မတ်တတ်) လမ်းလျှောက်လိုက်တာနဲ့ ခြေနှစ်ဖက်လုံးက မထောက်နိုင်တာပါ ၂။ သမီး အသက် ၂၇ ပါ အရပ် ၅ ပေ၃ လက်မရှိပြီး ပေါင် ၁၀၂ရှိပါတယ် အကြောအရမ်းတက်တတ်ပြီး နေ့ရက်တိုင်း ဘာမှ မလုပ်ချင်သလိုဖြစ်ပြီး ပင်ပန်းနေသလိုခံစားရပါတယ်ဆရာ အစားလည်းပုံမှန်စားပြီး အိပ်တာတော့ တခါတလေ နောက်ကျတတ်ပါတယ်ဆရာ ကွန်ပြူတာလည်းနေ့စဉ်သုံးရပါတယ်ဆရာ တခါတလေတော့ အပြင်တွေပတ်ရလို့ မသုံးရပါဘူးဆရာ သမီးအလုပ်က Marketing အလုပ်ပါဆရာ မျက်မှန်က power 100 နဲ့ 70 ရှိပါတယ် အကျင့်ပါမှာစိုးလို့ လိုအပ်မှပဲ တက်ပါတယ်ရှင် အဲ့လိုမျိူးရောလုပ်လို့ရလားဆရာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ရော ဆိုင်ပါသလားရှင် ရာသီနဲ့ အိမ်ထောင်ရေး မသိ။ မျက်မှန်ဆိုတာ စာကြည့်ကို စာကြည့်ချိန်မှာသာသုံးပြီး အဝေးကြည့်က အမြဲတပ်ထားရတယ်။ တခါတလေ သတ်ပုံတွေ ပြင်လိုက်တယ်။ ဆောရီး။ လိုအပ်မှပဲ တပ်ပါတယ်လို့ ရေးရတယ်။ တက်ဆိုတာ အထက်တက်တာ အတန်းတက်တာ။ ၃။ တက် နဲ့ တတ် လည်း အများအားဖြင့် မှားကြတယ် ဆရာ။ ဆရာအချိန် ပေးနိုင်ရင် တင်ပေးစေချင်လို့ပါ။ ၄။ ဘလော့ကိုဝင်မကြည့်တက်လို့ပါဆရာ ဝင်ကြည့်တက်သွားပါပြီ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ။ ၂ ခါလုံးမှာ တက
ဆူးပုပ်ကြီးရွက်ဆိုတာကို မသိဘူးဆရာရေ စားကောင်းမယ့် ပုံပါပဲ။ ဆူးပုပ် နှစ်မျိုးရှိတယ်။ ဆူးပုပ်ကြီးနဲ့ ဆူးပုပ်လေး။ အညာဒေသကလူတွေ အသဲစွဲကြိုက်ကြတဲ့ ဆူးပုပ်ကြီးရွက် လို့ ဆိုကြပေမဲ့ အညာဒေသ တောပိုင်းမှာ ဆူးပုပ်လေးကိုသာ ဟင်းချိုချက် စားသုံးတယ်။ အောက်အရပ်မှာ မသိသူက များတယ်။ မြို့သားတွေက ဆူးပုပ်ကြီးကို ပိုသိကြတယ်။ ဆူးပုတ်ကြီးပင် သို့မဟုတ် ဆူးရစ်ပင်ကို ရုက္ခဗေဒအလို Acacia pennata အကေးရှား ပင်နာတာ ဟု ခေါ်သည်။ မျိုးရင်းမှာ Leguminosae Jussieu လီဂူမီနိုး စီအီး ဖြစ်သည်။ ဆူးရစ်ပင်သည် ဆူးများရှိသော ချုံပင်ကြီးမျိုး ဖြစ်သည်။ နွယ်၍ တက်တတ်သည်။ အရွက်အနံ့မှာပြင်း၍ ထိုအနံ့ဖြင့် ဆူးရစ်မှန်း သိသာသည်။ ဩဂုတ်လမှ အောက်တိုဘာလအတွင်း ပွင့်သည်။ သီးတောင့်များသည် ၄ လက်မမှ ၈ လက်မအထိ ရှိသည်။ အရွက်သည် ဆေးဖက်ဝင်သည်။ ဆူးရစ်ပင်ကို မြန်မာနိုင်ငံ အရပ်ရပ်၌ တွေ့ရသည်။ ဆူးရစ်ကို ဆူးပုပ်ကြီးဟူ၍လည်း ခေါ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံ အနှံ့အပြား၌ ပေါက်ရောက်သည်။ သဘာ၀အလျောက် အလေ့ကျ ပေါက်သော်လည်း ခြံဝင်းများ အတွင်း၌ စားပင်အလို့ငှာ အသင့်အတင့် စိုက်ပျိုးကြသည်။ ပုံသဏ္ဌာန် အပင် နွယ်ပင်မျိုးဖြစ်၍ ပင်စည်အသားမာသည်။ အခေါက်ပါးသည်။ တပင်လုံး ဆူးများရှိ၏။ အရွက်
သပ် နဲ့ သတ်
၁။ သပ်ပုံမှားရင်လည်း ခွင့်လွှတ်စေချင်ပါတယ် ကြိုးစားပါ့မယ်ရှင့် ၂။ ဆရာ သပ် ဆိုတဲ့ အသုံးအနုန်း ဘယ်လိုသုံးရတယ်ဆိုတာလေးရေးပေးပါ ဆရာ။ ၃။ ကျနော့်အသက် ၄၆ နှစ်ရှိပါပြီ။ ကျနော် ညာဘက်လက်နှင့် စာရေးပါတယ်။ အရင်ကစာရေးရင် အတန်အသင့်လှပြီး သက်သက်ရက်ရက် ရှိပါတယ်။ ၃/၄ နှစ်လောက်ရှိပါပြီ စာရေးရင် ထိမ်းမရဘဲ အောက်ဘက်ကို ဆွဲဆွဲသွာပါတယ်။ အရင်ကရေးသလို သက်သက်ရပ်ရပ်လည်းမရှိ/လှလည်းမလှတော့ပါ။ ့့့့့ သပ်သပ်ရပ်ရပ်လို့ရေးရတယ်။ ထိန်းမရလို့ ရေးရတယ်။ သပ် စုပ်သပ်သည် ဆီလိမ်းဖီးသပ် ပွတ်သပ်ပေးပါ လက်သပ်မွေး လာဘ်သပ်ပကာရ သုံးသပ်ဆင်ခြင် သပ္ပါယ် သပ်ထိုး သပ်နုတ် သပ်ရပ်အောင်ဝတ်စားပါ သပ်လျှိုသူ ကျောသပ်ရင်သပ် ခေါင်းကိုသပ် ရွှေရင်စမ်းသပ် နှီးသပ်သည် သတ် ကတ်ကတ်သတ်သတ် ကန့်သတ်ထားသည် စသတ် ဆီသတ်ပါ ဓမ္မသတ် နပန်းသတ် နယ်ပယ်သတ်မှတ် ပရိသတ် ပသတ် မြင်းဇက်သတ် ရက်သတ်မှတ်လိုက်ပြီ လက်စသတ် သတ္တဌာန သတ္တမနေရာရသည် သတ္တရဘန် သတ္တဝါ သတ္တိရှိပါ သတ္တုဓာတ် သတ္တဗေဒ သတ္ထန္တရကပ် သတ်ညွှန်း သတ်နင်း = သစ်နင်း = သနင်း သတ်နင်း = သတ္ထုမဒ္ဒန = ရန်ကိုနှိမ်နင်းနိုင်သောမင်း သတ်ပုံ သတ်ပုံကျမ်း သတ်ပုံသတ်ညွှန်းကျမ်း သတ်ပုတ်နေကြသည် သတ်မှတ် သတ်မှတ်ထားသည့်နေရာ သတ်ဖြတ် သတ်သတ်ဖယ်ထာ
သူ့ဆီမှာ တန်းစီပါ လူစည်သည်
၁။ ဆရာခင်ဗျ သူ့စီမှာ နဲ့ သူ့ဆီမှာ ဘယ်ဟာက အမှန်ပါလဲ သိချင်ပါတယ်ခင်ဗျ ၂။ မင်္ဂလာပါ ဆရာ မြန်မာစာမှာ စီနဲ့ ဆီကို ဘယ်လိုသုံးလဲ သိချင်ပါတယ် ဥပမာ ကလေးတွေဆီက ကလေးတွေစီက ကလေးတွေဆီက ဆိုတဲ့စာလုံးပေါင်း ဆီ ကိုမှားနေတယ်ပြောနေလို့ပါဆရာ ၃။ ဆရာစီကစာယူတင်ခွင့်ယူဖူးပါတယ် ဆရာ့ဆီကလို့ ရေးသင့်။ ဆရာစီဆိုရင် ဦးစီ ဒေါက်တာစီ အမည်ရှိသူဖြစ်သွားမယ်။ ဆရာ့ဇီကလို့ အသံထွက်ရတယ်။ ၄။ သားဖွားဆရာမတယောက်က mega3နဲ့ folic acid တနေ့တလုံးဆီသောက်ခိုင်းပါတယ် ခုကိုယ်ဝန်ရနေပြီဆိုတော့ ဆက်သောက်ရဦးမှာလား ဆရာ။ တနေ့တလုံးစီ (တလုံးကျ) လို့ ရေးသင့်။ ၅။ ဆရာ့စီက အတုယူစရာတွေကို မှတ်ပါတယ်ဆရာ။ ဆရာ့ဆီကလို့ ရေးရပါမယ်။ ဆရာ့ဇီကလို့ အသံထွက်ရတယ်။ ၆။ အထဲက ကလေးလည်းမတွေ့ဘူး။ နှလုံးလည်းမခုန်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ အဲ့ဒါ ဘယ်လိုဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတာ ဆရာ့စီက အကြံဉာဏ်လိုချင်လို့ပါတဲ့။ ဆရာ့ဆီကလို့ ရေးရပါမယ်။ ဆရာ့ဇီကလို့ အသံထွက်ရတယ်။ ၇။ ဘီပိုးရှိလူနာ့စီကသွေး သူ့မျက်စိကို စင်လို့မေးလာတယ်။ လူနာ့ဆီကလို့ ရေးရပါမယ်။ လူနာ့ဇီကလို့ အသံထွက်တယ်။ ၈။ ကိုယ့်စီနဲ့ ပန်းတိုင်စီလို့ မှားရေးထားတာ တွေ့တယ်။ ကိုယ့်ဆီ၊ ပန်းတိုင်ဆီလို့ ရေးရတယ်။ ၉။ ကွန်မင့်တခုမှာ ဆရာ့စီက အတုယူစရာတွေကို မှတ်
Breast Fibroadenosis (ဖိုက်ဘရို-အဒီနိုးဆစ်) ရင်သားရောဂါ
(ကန်တော့) ၁။ သမီးက (့့့့့) ပါ။ သမီးရဲ့ ရင်သားညာဘက် (ချိုင်းနား) ခြမ်းပေါ်မှာ အကျိတ်ပေါက်နေပါတယ်။ ၃ ပတ်လောက် အရမ်းနာပြီးရင် ၈ ရက်လောက် သက်သာသွားပြန်ပါတယ်။ (့့့့့) ဆေးရုံမှာလည်း သွားပြီးတဲ့ပြအခါမှာ ဟော်မုန်းမညီတဲ့ Fibroadenosis ဖြစ်နေတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ အဲ့ဒီအတွက် ပဋိဇီဝဆေးများ သောက်ရမည်ဟုပြောပါသည်။ သမီးက အိမ်ထောင် မကျသေးပါဘူး။ နောက် ၂ နှစ်တွင် အိမ်ထောင်ပြုပြီး ကလေးတန်းယူရန်လည်း အစီစဉ်ရှိပါသည်။ အသက်က ၂၆ နှစ် ရှိပါပြီ။ ၄င်းဆေးများကိုသောက်ပြီး ကလေးမရမှာကိုလည်း စိုးရိမ်ပါတယ်ရှင့်။ ဒါကြောင့် လမ်းထိပ်ရှိဆေးခန်းတွင် ဆေးရုံဆေးစာအုပ်နှင့်တကွ ထပ်မံပြသရာ ဆရာဝန်မှ ခွဲစိတ်ပါရန်၊ ဆေးသောက်လျှင်လည်း အရှင်း ပျေက်ကင်းနိုင်မည် မဟုတ်ကြောင်းနှင့် သွေးဆုံးချိန် (သို့) အသက် 40/50 ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ရန် 50% ဖြစ်နိုင်ကြောင်း ပြောပါသည်။ ဆေးရုံစာအုပ် Scan လည်း ပူးတွဲပေးပို့အပ်ပါသည်။ မည်သို့ ဆုံးဖြတ်သင့်သည်ကို ဆရာ့ဆီမှ အကြံပြုချက် ထပ်မံရလိုပါသဖြင့် အကြံတောင်းခံအပ်ပါသည်ရှင်။ ဆေးကုရာမှာ ဒုတိယအကြံဉာဏ်၊ တတိယအကြံဥဏ်ယူတာ ကောင်းပါတယ်။ အကြံပေးသူကလဲ တော်သင့်သူဖြစ်ရမယ်။ ကျွန်တော်က အထူးကု မဟုတ်ပါ။ Fibroadenosis (ဖိ
Uterine Fibroid (1) သားအိမ်အလုံး (၁)
၁။ ဆရာရှင့် ရိုသေစွာဖြင့်စာရေးလိုက်ပါသည်။ ကျွန်မသားအိမ်မှာ အသားအလုံးကြောင့် သားအိမ်တခုလုံးဖယ်ထုတ်သင့် မသင့်ဆရာနှင့် တိုင်ပင်ချင်လို့ပါ။ 19-September-2017 Bangkok မှာ overall ဆေးစစ်လိုက်တဲ့အခါ သားအိမ်တွင် အသားအလုံးခြောက်လုံး တွေ့ပါတယ်။ OG က BKK မှ Ultrasound result က CD အခွေနှင့်ဖြစ်နေလို့ မြန်မာပြည်မှာ ပြန်ရိုက်ခိုင်းပါတယ်။ 6th December 2017 မှာထပ်ရိုက်ပါတယ်။ OG က သားအိမ်ကို အကုန်ထုတ်ပြစ်ဖို့ပြောပါတယ်။ အလုံးကများပြီး နေရာအတော်များများမှာရှိနေလို့ အသက်ကလည်း ၄၅ ဆိုတော့ ထုတ်ခိုင့်ပါတယ်ရှင့်။ ဆေးစစ်ချက် result from BKK, ရန်ကုန်တွင် စစ်ထားသော Ultrasound ဓါတ်ပုံ နှင့် မှတ်တမ်းကိုလည်း တွဲပေးထားပါသည်ရှင့်။ တကယ်လို့ ခွဲရမယ်ဆိုရင်လည်း OG နှင့် ခွဲသင့်တာလား ခွဲစိတ် specialist နှင့် ခွဲရင် ပိုကောင်းပါသလား ဆရာ။ ဆောရီး။ သားအိမ်အလုံးတွေရှိတယ်။ သားအိမ်ပါထုတ်သင့်တယ်။ အိုဂျီနဲ့ခွဲသင့်။ တနှစ်အတွင်းမှာ မေးတဲ့သူတွေ အတော်များခဲ့တယ်။ ၂။ ဆရာရှင့် ကျွန်မအသက် ၂၇ နှစ်၊ ရန်ကုန်ကပါ။ အိမ်ထောင်သက် ၂ နှစ်နဲ့ ၃ လ၊ ကလေးမရှိသေးပါ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မှ အလုံးရှိမှန်းသိလို့ ကိုယ်ဝန်လေးလကျော်မှာ ပျက်ကျခဲ့ပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျပြ
ခန်း နဲ့ ခမ်း
၁။ ခမ်းမ နဲ့ ခန်းမ ဘယ်လိုရေးတာမှန်ပါသလဲဆရာရေ ၂။ သီးသန့်အခမ်း ကျွန်မက အခန်းလို့သိထားပါတယ်ဆရာ။ အခမ်းအနား၊ အိပ်ခန်း၊ စာသင်ခန်း။ ၃။ ဆရာခင်ဗျား မြို့တော်ခမ်းမ/ခန်းမ ဘယ်စကားလုံးက သတ်ပုံအမှန်ပါလဲခင်ဗျ ကျန်းမာပါစေခင်ဗျာ ခမ်းနားသော ​ခန်းမဆောင် ခန်း ကိန်းခန်း၊ ကုန်ခန်းသည် ခန်းဆီး ခန်းမဆောင် ခန်းဝင်ဥစ္စာ ခန်းဝါ ခန်းတောက်ပင် ခန်းခြောက် ချွဲခန်းသလိပ်၊ စံခန်း၊ စက်ခန်း၊ စခန်းချသည် စခန်းတထောက်နား စမ္မခန်း (ဗေဒင်သုံး)၊ စာသင်ခန်း ဆုံးခန်းတိုင် တခန်းရပ်ပြဇာတ်၊ တိုက်ခန်း၊ တိုင်းခန်းလှည့်လည် တနေကုန် တနေခန်း၊ ဓာတ်ခွဲခန်း၊ မီးစာကုန် ဆီခန်း၊ ပြခန်း၊ ရုံးခန်း ရှုမခန်း လင်ခန်းမယားခန်း၊ သင်ခန်းစာ၊ အံ့မခန်း အခန်းနံပတ် အိပ်ခန်း အိပ်ရာတိုက်ခန်း စေးမခန်းပင်၊ ဗေဒင်ကိန်းခန်း ရေခန်းသည် လေ့ကျင့်ခန်း၊ သေခန်းရှင်ခန်း၊ နှာရောင်ခန်း၊ ခမ်း ခမ်းကြီးနားကြီး ခမ်းနား တခမ်းတနား၊ ကြီးကျယ်ခမ်းနား မင်းခမ်းမင်းနား မျက်ခမ်းစပ်ရောဂါ သဘင်အခန်းအနား အခမ်းအနား ကျောင်းသင်္ခန်း ကျောင်းသင်္ခမ်း၊ နှုတ်ခမ်း၊ နှုတ်ခမ်းမွေး ခဏ်း ဒါနခဏ်း (ဒါနခန်း) ခြီးမွမ်းခဏ်း (ခြီးမွမ်းခန်း) သင်ခဏ်းစာ (သင်ခန်းစာ) လေ့ကျင့်ခဏ်း (လေ့ကျင့်ခန်း) ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
အော် တကိုယ်ဆွေးဘွယ်၊ မြောင်ခင်တန်းနှင့်၊ တောင်ကမ်းကွယ်၊ လမ်းဘယ်ဝယ်ရှိ၊ နယ်ရှစ်ခွင်လုံး၊ တိမ်မင်တုံး၊ မိုးလုံးအိလို့၊ အို သိတတ်ပြီ၊ မြိုင်ခြေအုပ်က၊ ရွှေဘုတ်ကယ်အီသည်၊ ဌာနီပြည်ကြီးကလဲ ဝေးသနှင့်။ ငုံကင်းငယ်ပန်းမန်၊ ရွက်ရင့်လျှောလို့၊ ရွက်ကြောငယ်လှန်သည်၊ တောင်ပြန်လေညင်းကလဲ သွေးသနှင့်။ သူရကန်စက်၊ ဖန်ဂယက်လဲ၊ လယ်ချက်ဗဟို၊ ယုဂန်စွန်းက၊ တိမ်ကွန်းငယ်ခိုသည်၊ ချိန်ညို နေမင်းကလဲ ဧသနှင့်။ နောင့်ဆွေးငယ် ဗျာဝှန်၊ လွန့်ထက်လွန်ကို၊ တသွန်ကူလှောက်၊ ဘယ်ဖြေဆည်ဖျောက်နိုင်လိမ့်။ တောမျောက်က ကြိုးခွေ၊ စိမ့်ကြီးမြိုင်ချောင်မှာ၊ ရွှေဖိုးခေါင် သံချိုညောင်း၊ ဒေါင်းက အိုးဝေ။ တောင်တံပြက်၊ ကျောက်စက်ကျ ဝမ်းရေ၊ တွေတွေစိမ့်ကြည်ဧ။ အို နောင့်တဲဟာမို့၊ ရွှေသဲမှာ ကြွေကြွေဆူလှတယ်၊ နန်းသူကြောင့်လေး။ ။ ဦးကြင်ဥရေးတဲ့ ပဒေသာသီချင်းများ စာအုပ်ကို ၁၉၆၁ ခု ဇူလိုင်လမှာ ထွန်းထွန်းကုမ္ပဏီအတွက် မေပုံနှိပ်တိုက်မှာ ရိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ရှစ်တန်းမှာ သင်ယူခဲ့ရတယ်။ အတော်များများ အလွတ်ရသေးတယ်။ အကုန်တော့ မရတော့ပါ။ စာသားတွေရော သတ်ပုံတွေပါ လွဲပြီးရေးထားတာတွေ အများကြီးတွေ့နေရတယ်။ အော် တကိုယ်ဆွေးဘွယ် ့့ မြိုင်ခြေအုပ်က၊ ရွှေဘုတ်ကယ်အီသည်၊ ဌာ
Acne vulgaris ဆိုးတဲ့ဝက်ခြံ
ကျမက မြန်မာပြည် ့့့့့ တိုင်း ့့့့့ မြို့တွင်နေထိုင်ပါတယ်။ အသက် ၃၈ နှစ်ရှိပြီး အိမ်ထောင် မရှိသူတစ်ဦး ဖြစ်ပါသည်။ ယခင် ၁ နှစ်ခန့်က ပါးပြင် အောက်တွင် ဝက်ခြံကဲ့သို့ အသီးများတက်ပြီး မျက်နှာတပြင် လုံးနီးပါးဖြစ်ပါသည်။ မညှစ်လျှင် မထွက်ဘဲ အဆီအခဲသဖွယ် အလုံးများရှိနေပြီး ညှစ်လိုက်မှ အဆံအခဲအမာအလုံးလေးများ ထွက်သည်။ ဆေးခန်းများတွင် ပြကြည့်သော်လည်း မသက်သာပါ။ မည်ကဲ့သို့ ပြုလုပ်ရမည်ကို ဆရာမှပြောပြ ပေးပါရှင့်။ (၁) Acne and Antibiotics ဝက်ခြံအတွက် ပဋိဇီဝဆေးများနဲ့ (၂) Acne ဝက်ခြံ ရောင်စုံ ထဲမှာပါတာကို အရင် လုပ်ကြည့်ပါ။ Doxycycline ကြာကြာသောက်ပါ။ (စာထဲမှာပါတယ်။) အလှအပအသုံးအဆောင် သဘာဝ (သနပ်ခါး) ကလွဲရင် မသင့်ပါ။ မျက်နှာ တနေ့ ၂ ကြိမ်သစ်ပါ။ ရာသီမှန်-မှန် မသိရပါ။ စိတ်ဖိအားနဲ့ ဟော်မုန်း (ရာသီ၊ ကိုယ်ဝန်) တွေကနေ သက်ရောက်စေနိုင်တယ်။ (အိမ်ထောင်မရှိလို့ရေးထားတာ တွေ့ပါတယ်။ ဆောရီး) စိတ်ပျော်ရွှင် ပေါ့ပါးအောင် ကြိုးစားပါ။ ဗီတာမင် စီ ၅ဝဝ နေ့တိုင်းသောက်ပါ။ Acne vulgaris ဆိုးတဲ့ ဝက်ခြံခေါ်တယ်။ အဖြစ်များတယ်။ ခေါင်းဖြူ-ခေါင်းမဲ ဝက်ခြံမှာဖြစ်တာတွေ အကုန်ဖြစ်တယ်။ ဒါ့အပြင် အဆီပြန်မယ်။ အဖုအသီးထမယ်။ အမာရွတ်ထင်မယ်။ အရောင်ရင့်နေမယ်
လွန်ခဲ့တဲ့ ၃ နှစ်တိတိက
ဦးဝင်းတင် အလုပ်လုပ်သွားခဲ့တဲ့ ဒီဝေ့ဖ်ရုံးခန်းက နေရာကိုရောက်တယ်။ ငယ်သူငယ်ချင်း မုံရွာအောင်ရှင်နဲ့ စကားတွေအကြာကြီးပြောခဲ့တယ်။ အခုတော့ မူးလို့တောင်ရှူစရာမရှိသူတွေ ကျေးဇူးကန်းမှုကြောင့် အမှောင်ခေတ်ထဲ ရောက်ရပြန်ချေပြီ။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ ၃၀-၄-၂၀၂၀
၁၉၆၄-၆၅ ဆယ်တန်း စကားပြေလက်ရွေးစင်ထဲမှာ ရွေတိဂုံစေတီတော်ကို ပြည့်မျက်နှာလို့ သင်ခဲ့ရတယ်။ အစိုးရခန့်ဆရာဝန်လုပ်နေစဉ်မှာ မိသားစုနဲ့အတူ ဘုရားဖူရောက်ကြတယ်။ အလုပ်နဲ့ရန်ကုန်လာရတိုင်း ဘုရားရောက်ပါတယ်။ ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲပြီးတော့ လျှို့ဝှက်တွေ့တာတခုကို ရွှေတိဂုံရင်ပြင်တနေရာမှာ ချိန်းခဲ့တယ်။ တိုင်းပြည်ကထွက်သွားရပြီးတော့ ၂၀၁၈ နှစ်က ဘုရားကို တခါထပ်ဖူးကြရပါတယ်။ ရွှေတိဂုံစေတီတော်ကြီးကား ပြည့်မျက်နှာနှင့်လည်းတူပါပေ၏။ ပြည့်နှလုံးသားတည်ရာလည်း ဖြစ်ပါပေ၏။ သမိုင်းကျောက်စာနှင့်လည်း တူပါပေ၏။ သစ္စာတိုင်တည်ရာလည်း ဖြစ်ပါပေ၏။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ ၃၀-၄-၂၀၁၈ ၃၀-၄-၂၀၂၁
Events in May မေလထဲမှာ
• The month of Music တေးဂီတလ၊ နယူးဇီလန် • May 1 = May Day (International Workers' Day) အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားနေ့ • May3= Constitution Day ဖွဲ့စည်းပုံနေ့ ပိုလန် + ဂျပန် • May5= Children's Day ကလေးများနေ့ တောင်ကိုရီးယား + ဂျပန် • May5= International Day of the Midwife နိုင်ငံတကာ သားဖွါးဆရာမများနေ့ • May5= မြန်မာနိုင်ငံ မီးသတ်နေ့ • May 8 = World Red Cross and Red Crescent Day နိုင်ငံကတာ ကြက်ခြေနီနေ့ • May 10 = Mother's Day အမေနေ့ မက်ဆီကို + ဂွါတီမာလာ + အယ်လ်ဆာဗာဒို • May 12 = International Nurses Day သူနာပြုနေ့ • May 12 = International Awareness Day for Chronic Immunological and Neurological Diseases နာတာရှည် ခုခံအားနှင့် အာရုံကြောရောဂါများ အသိပေး လှုံ့ဆော်ရေး နိုင်ငံတကာနေ့ • May 18 = International Day of Capitalism နိုင်ငံတကာ အရင်းရှင်စနစ်နေ့ • May 27 = ၁၉၉ဝ ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲ နှစ်ပတ်လည်နေ့၊ မြန်မာနိုင်ငံ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
Food Storage and Safety Guidelines အစားအသောက် သိုလှောင်ခြင်း
၁။ သမီး စိတ်ထဲမရှင်းတာလေး မေးချင်လို့ပါ။ အစားအသောက်တွေ အသားတွေ ချက်ထားတဲ့ဟင်းကို ရေခဲသေတ္တာထဲ ဘယ်နှစ်ရက် ထားသင့်ပါသလဲဆရာ။ သမီးသူငယ်ချင်းက တပတ်လောက်ဘပဲထားထား ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးတဲ့။ သမီးကတော့ ၂ ရက်လောက်ဘဲထားသင့်တယ်။ အသားအစိမ်းဆိုရင်တော့တမျိုးပေါ့။ ချက်ပြီးသားဆိုရင် ၂ ရက်ထပ် ပိုထားရင် ကျန်းမာရေးအရမကောင်းပါဘူးလို့။ သူကအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးရတယ်တဲ့။ အဲ့ဒါ စိတ်ထဲမရှင်းမလင်း ဖြစ်နေလို့ပါဆရာ။ ၂။ ဆရာရှင့် ရေခဲသေတ္တာသုံးခြင်းသည် ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်နိုင်စေပါသလားရှင်။ အသားငါးများ၊ အရွက်၊ အအေး၊ ဥ၊ နို့ လက်ဖက်တို့ကို ရေခဲသေတ္တာထဲတွင် ကြာရှည်ထားပြီး စားသောက်ခြင်းများသည် ကျန်းမာရေးကို သိသိသာသာ ထိခိုက်နိုင်ပါသလားရှင်။ ရေခဲသေတ္တာအသုံးပြုခြင်းသည် ကင်ဆာရောဂါဖြစ်ပွားခြင်းနှင့် ဆိုင်မဆိုင်ကိုလည်း ဖြေကြားပေးစေချင်ပါတယ်ရှင့်။ အစားအစာတွေကို တနပ်စာထက်ပိုနေတာမှန်သမျှ ထားသိုဘို့လိုရင် စတနစ်တကျ ထားသိုတတ်ရပါမယ်။ အစားအစာရဲ့ အရည်အသွေး၊ အနံ့-အရသာ၊ အာဟာရဓါတ်တွေ မနည်းစေ၊ မပျက်စီးစေအောင် သတိထားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မထားသိုတတ်လို့ အစားအစာပုပ်သိုးပြီး စာမိရင် အစာဆိပ်သင့်ပါမယ်။ အခြေခံအားဖြင့် ရေခဲသေတ္တာထဲမှာ ထားသိုရပါမယ်။ တချို့ကို အစား
Throat cancer (Larynx cancer) လည်ချောင်းကင်ဆာ
၁။ ဆရာရှင့် လည်ချောင်းကင်ဆာအကြောင်းသိချင်ပါတယ်ရှင့်။ ဘယ်လိုအချက်တွေက လည်ချောင်းကင်ဆာ ဖြစ်နိုင်ခြေကိုပြောလို့ရပါသလဲရှင်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်။ ရိုသေလေးစားစွာဖြင့်။ ၂။ ဆရာရှင့် လည်ချောင်းကင်ဆာရောဂါ လက္ခဏာတွေက ဘယ်လိုပါလဲရှင့်။ အခုတလော လည်ချောင်းထဲကနေ အသက်ရှူမဝသလိုဖြစ်ပြီး မေးစေ့အောက်နားက အသားတွေက နာနေပါတယ်ရှင့်။ စိတ်ဒေါသဖြစ်ပြီး အော်လိုက်ရင် နှလုံးခုန်မြန်လာပြီး လက်ကလည်း ချွေးစေးတွေထွက်လာပါတယ်။ လည်ချောင်းမှာလည်း တခုခု တစ်နေသလုဖြစ်ပြီး နေရတာမကောင်းပါဘူးရှင်။ ပြောပြပေးပါဦးနော်။ ၃။ ဆရာ ကျွန်တော့အဖေ လည်ချောင်းကင်ဆာဖြစ်နေတယ်။ ဗိုက်လည်းပိုက်ထည့်ထားတယ်။ အသက်က ၈၇ နစ်ပါ။ ဓါတ်ကင်သင့် မကင်သင့် အကြံပေးပါ။ မျော်လင့်ချက် ဘယ်လောက်ရှိပါသလဲ သိပါရစေ ဆရာ။ ကျေးဇူးပါ။ ၄။ သမီးရဲ့ အဖေ (၅၆ နှစ်) မှာ အသံဝင်နေသည်မှာ ၈ လ ၉လ ကြာနေပါသည်။ ယခုလ ၈-၃-၁၂ ရက်တွင် နား-နှာခေါင်း-လည်ချောင်း ဆရာဝန်နှင့်ပြသပြီး အသံပြွန်နေရာသို့ မှန်ပြောင်းဖြင့် ကြည့်ပါသည်။ အသံပြွန် ၂ ချောင်းတွင် ၁ ချောင်းမှာ အဖုလေးများ ဖြစ်နေပါသည်ဟုပြောပြီး ဖြတ်ပစ်လျှင် ပြန်ပြီးအသံထွက်နိုင်ပါသည်ဟုပြောပါသည်။ ၁ဝ-၃- ၁၂ ခွဲစိတ်ပြီး အသားစယူခဲ့ပါသည်။ တတ်နိုင်သလောက် အ
သတ်ပုံလည်း မှန်တယ်။ ပညာအစစ်တွေ သင်ယူနိုင်တဲ့ခေတ် ရောက်ရမည်။ ပုံ အထက (၁) မုံရွာ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
ကိုမြတ်မှိုင်းနဲ့ ပန်တျာဌေးဌေးမြင့်တို့ ဦးဆောင်တဲ့ မန္တလေး လမင်းတရာအငြိမ့် ပုံတွေ့လာတယ်။ ကျေးဇူး။ လမင်းတရာက အငြိမ့်လောကမှာ ဂန္ထဝင်။ ကြည်အောင်ကဗျာကလည်း လမင်းတရာ။ ကဗျာလောကမှာ ဂန္ထဝင်။ တရာဟူသောသတ်ပုံသည်လည်း မြန်မာစာလောကမှာ ဂန္ထဝင်။ ကျွန်ုပ်သည်ကား ကျပျောက်သွားသော တရာတန် တကျပ်တန် ငွေစက္ကူဟောင်းလေးတွေကို လိုက်ရှာနေသူသာဖြစ်ပါသည်။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ ၂၉-၄-၂၀၂၀ ၂၉-၄-၂၀၂၁ Sann Linn Oo ကျေးဇူး။